Akụkọ - Fi Europe 2019 - Ngosipụta Ngwa Nri na Ngosipụta Teknụzụ
Oke Osimiri Global gara Ngwa Nri Europe Europe 2019 site na Dec.3–5, 2019 na Paris, France.
Oge ngosi: 3 5 Dec 2019
Ebe ngosi: Paris, France
Othlọ Nbanye No.:7Q150
Fi Europe, nke UBM International Media a ma ama n'ụwa niile haziri na Paris, France, na 2019. Ngosipụta a bụ ihe omume mba ụwa n'ezie na ihe oriri na ụlọ ọrụ teknụzụ. Naanị ụbọchị atọ, ị ga-ezute ohere azụmahịa karịa ka ị nwere ike iche. Ezigbo ndị enyi, ndị tụkwasịrị obi na ndị ọkachamara ga-agba gị gburugburu.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ngosi a bụ nchịkọta kachasị ukwuu nke ndị na - ebubata nri, ndị na - ebupụ teknụzụ teknụzụ, ndị na - azụta ihe oriri na - atọ n’ime atọ n’ihe ngosi, aghọọla ihe oriri nri nke mmata kachasị elu n’ọgbakọ azụmahịa. Ndị ahịa mba ofesi jiri iwebata teknụzụ ọhụụ na ngwaahịa ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ n'otu oge, mekwara ka mbọ a na-agba n'ahịa mba ụwa kawanye nke ọma. nke ụlọ ọrụ ndị China na-esonye na ngosi ahụ kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụla nkwenye nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nri iji gbasaa ahịa mba ofesi ma melite asọmpi ahịa mba ụwa site na ngosi a.
Na ngụkọta nke 80,000 square mita, ihe ngosi 2017 dọtara ihe karịrị ndị ngosi 1,800 na karịa ndị ọkachamara 26,000 sitere na mba na mpaghara 119, 78% n'ime ha nwere ikike ịzụta na 29% onye nwere mmefu ego karịa euro 500,000.